I-CALIFORNIA ITHUMELA IINTLAWULO ZOKUVUSELELA EZINGAMA-705,000 ZE-$600-$1,100 KWIVEKI EZAYO. - OKUNYE
I-California ithumela iintlawulo zokuvuselela ezingama-705,000 ze-$600-$1,100 kwiveki ezayo.
Iintlawulo zokuvuselela ubhubhane kubahlali abarhola ngaphantsi kwe-75,000 yeedola kwingeniso epheleleyo elungelelanisiweyo yaqala ngasekupheleni kuka-Agasti, inika abahlali abafanelekileyo ukuya kuthi ga kwi-1,100 yeedola.
IBhodi yeRhafu yeFranchise yaseCalifornia ngoLwesibini, ngo-Oct. 5 iya kuqalisa ukusasaza i-480 yezigidi zeedola Iintlawulo zeGolden State Stimulus II kubahlali abafanelekileyo abenza ngaphantsi kwe-75,000 yeedola ingeniso epheleleyo elungelelanisiweyo .
Iintlawulo zokuvuselela i-GSII zaqala ngasekupheleni kuka-Agasti kwaye zatsalwa kwingxowa-mali yokubuyisela ubhubhane kunye nentsalela ye-75.7 yeebhiliyoni zeedola. Ngexesha ukuhanjiswa kweveki ezayo kugqityiwe, urhulumente uya kube ehlawule i-2.33 yeebhiliyoni zeedola kuncedo lobhubhane kubantu baseCalifornia abanemivuzo ephakathi.
I-ofisi ye-Gov. Gavin Newsom iqikelele ngeli hlobo ukuba phantse isibini kwisithathu sabantu baseCalifornia bafaneleka ukufumana i-stimulus ye-600 yeedola phantsi kweenkqubo ezimbini ze-Golden State Stimulus.
Inkqubo yokuqala ye-Golden State Stimulus ihambisa iintlawulo ze-$ 600- $ 1,200 kubahlali abafumana imivuzo ephantsi abathi bafune i-Credit Earned Revenue Tax Credit. Abo bahlali bahlala befumana ngaphantsi kwe-30,000 yeedola ngonyaka. I-$600 eyongezelelweyo yeyabantwana abafanelekileyo okanye abaxhomekeke kusapho.
Kwinkqubo ye-GSII, abahlali abafanelekileyo nabaxhomekeke kubo baya kufumana i-$ 500 eyongezelelweyo.
Ngethuba lokuqala ekuhanjisweni kwe-GSII, ukuhlolwa kwamaphepha kuya kukhutshwa kunye neediphozithi ngokuthe ngqo, ngokutsho kuka-Andrew LePage, ummeli kunye ne-Ofisi yeMicimbi yoLuntu kwi-arhente yerhafu karhulumente.
Sacela iLePage ukuba isihlaziye kwiprogram ye-GSII, eya kuqhubeka nokusabalalisa imali kwi-2022.
Umbuzo: Ngaba ungasihlaziya ukuba zihamba njani iintlawulo ze-GSS II?
UKUYA: Silindele ukukhupha malunga neentlawulo ze-705,000 - malunga ne-330,000 yediphozithi ngqo kunye malunga ne-375,000 yokuhlola iphepha.
I-LePage iqaphele ukuba iidiphozithi ezithe ngqo zidla ngokuvela kwiiakhawunti zebhanki phakathi kweentsuku ezimbalwa zoshishino, ngokuxhomekeke kwiziko lezemali, kwaye ibhodi yerhafu icebisa abantu ukuba bavumele ukuya kwiiveki ezintathu ukufumana itshekhi yephepha emva kokuba ithunyelwe.
Umbuzo: Zingaphi iintlawulo ezithunyelweyo ukuza kuthi ga ngoku?
UKUYA: Ukuza kuthi ga ngoku, urhulumente ukhuphe malunga ne-2.6 yezigidi zeediphozithi ngqo ze-GSS II. (Malunga ne-600,000 ngo-Aug. 27 kwaye malunga ne-2 yezigidi ngoSeptemba 17).
Umbuzo: Urhulumente ulindele ukwenziwa nini ukusasaza iintlawulo?
UKUYA: Okt. 15 ngumhla wokugqibela wokufakwa kwerhafu kunye nomhla wokugqibela we-GSS I kunye ne-GSS II kuninzi lwabantu baseCalifornia. Ukufaneleka kwe-GSS I kunye ne-GSS II kusekwe kwimbuyekezo epheleleyo yerhafu yengeniso karhulumente.
Siye sathetha ukuba sinethemba lokukhupha phantse zonke iintlawulo ze-GSS II ekupheleni konyaka (kunye neentlawulo zediphozithi ezininzi ngo-Oct. 31).
Qaphela: Ishedyuli yentlawulo ye-GSS II isekelwe kumandla karhulumente wokuqinisekisa ukufaneleka, ukukhusela kubuqhophololo kunye nokukhupha iintlawulo ze-GSS II ngaxeshanye nezinye iintlawulo ezinyanzelekileyo, kubandakanywa ukubuyiselwa kwerhafu, ukuhlawula, kunye neentlawulo ze-GSS I eziseleyo. Urhulumente unemiqobo eyahlukeneyo yokusetyenzwa, kubandakanywa umthamo woshicilelo kunye nokuposa.
Umbuzo: Naziphi na iimpazamo eziboniweyo ukuza kuthi ga ngoku?
UKUYA: Akukho okwangoku.
Umbuzo: Yimalini esele isasaziwe ukuza kuthi ga ngoku?
UKUYA: I-27 ka-Agasti kunye ne-17 Septemba iintlawulo ze-GSS II zongeza malunga ne-$ 1.85 yezigidigidi (malunga ne-$ 354 yezigidi nge-Aug. 27 kunye ne-$ 1.5 yebhiliyoni ngoSeptemba 17), ngaphezu kwexabiso le-5 ye-Oct. million).
Q: Kwaye yimalini eseleyo ekufuneka isasazwe?
UKUYA: Siqikelele ukuba malunga nezigidi ezisi-9 zeembuyekezo zerhafu yengeniso karhulumente ezifunyenweyo, ukuza kuthi ga ngoku, zibonakala zifanelekile kwi-GSS II. Nangona kunjalo, zonke iimbuyekezo zidlula ekuqinisekiseni ukufaneleka kunye nenkqubo yokuchasana nobuqhophololo, kwaye siya kufumana imbuyekezo engakumbi phakathi kwangoku kunye no-Oct. 15.
Kwakhona, njengoko kuchaziwe kwi-FTB's Uncedo ngeGolden State Stimulus webpage, abantu baseKhalifoniya abafake izicelo zabo kwiNombolo yeSazisi yoMhlawuli weRhafu ngoOkthobha 15 bazakuba kude kube nguFebruwari 15, 2022, ukuba bafake iimbuyekezo zabo zerhafu yengeniso kwaye bafanelekele i-GSS I & II ukuba bayahlangabezana nazo zonke iimfuno.
Ibhili yamva nje ye-Ohio Republican anti-vaccine inokufa
Iindwendwe zangaphandle ezigonywe ngokupheleleyo zinokuqala ukungena e-US nge-8 kaNovemba